Ganacsiga, Kooxda Daryeelka Carruurta si ay u siiyaan xarumaha daryeelka carruurta - Waaxda Ganacsiga Gobolka Washington
Bogga ugu weyn|Ganacsiga, Kooxda Daryeelka Carruurta si loo helo xarumaha daryeelka carruurta
Ganacsiga, Kooxda Daryeelka Carruurta si loo helo xarumaha daryeelka carruurta
$ 120,000 deeq ayaa awood u siineysa qorshaha wax iibsiga badan si loogu bixiyo xarumaha xanaanada cunugga gobolka oo dhan iyadoo la daboolayo wajiyada, sahayda nadiifinta iyo waxyaabo kale oo badan
OLYMPIA, WA - Maaddaama alaabada nadaafadda iyo waxyaabaha kale ee lagula dagaallamayo infekshinka COVID-19 laga waayey khaanadaha dukaanka bartamihii bishii Maarso, Child Care Aware ee Washington (CCAWA) ayaa aqoonsatay dhibaato xagga saadka ah oo soo foodsaartay bixiyeyaasha daryeelka carruurta. Faa'iido-la'aanta ayaa tallaabo qaadday, oo gaarsiisay alaab-qeybiyeyaasha si ay wax uga qabato baahiyaha degdegga ah ee alaabada sida warqadda musqusha, tuwaallada waraaqaha lagu qaato, saabuunta gacanta iyo warankiilada. In kasta oo ay heleen iibiyeyaal raalli ka ah inay buuxiyaan amarradooda, in yar ayaa dabooli karta baahida loo qabo in la gaarsiiyo gobolka oo dhan.
Ku soo gal Waaxda Ganacsiga ee Washington adoo wata $ 120,000 deeq deg deg ah si ay uga caawiso maalgalinta qorshaha CCAWA ee hagida xogta ee qiimeynta iyo buuxinta baahiyaha qaar ka mid ah xarumaha daryeelka carruurta 5,432 ee ruqsada u leh gobolka iyo xarumaha daryeelka carruurta ee daryeelka carruurta iyada oo loo marayo iibsi ballaaran qorshe.
"Bixiyeyaasha xanaanada cunuggu waxay kujiraan jiidaha hore ee cudurkan faafa, waxaana sharaf noo ah inaan taageerno Child Care Aware ee waxqabadka cusub ee Washington si caruurta iyo qoysaska loogu ilaaliyo nabadgelyada," ayay tiri Agaasimaha Ganacsiga Lisa Brown. Helitaanka sahay aad loogu baahan yahay oo loogu talagalay kuwa u baahan waxay xoojineysaa bulshada, gaar ahaan miyiga iyo meelaha fogfog, maadaama aan sii wadno joojinta faafitaanka COVID-19 iyadoo dib loo furayo dhaqaalaheena. ”
Baadhitaan bilow ah ayaa shaaca ka qaaday in ka badan kala badh xarumaha furan iyo 67% ee barnaamijyada daryeelka carruurta ee furan ay ka walaacsan yihiin helitaanka sahayda, iyagoo u arkaayay wax aan macquul ahayn in la helo, aad u yar awoodi kara, waxyaabaha aasaasiga ah ee ay u baahan yihiin si ay ula kulmaan shuruudaha fayadhowrka iyo baahiyaha aasaasiga ah.
“Waxaan sii wadeynaa inaan maqalno in bixiyeyaashu aysan heli karin sahay kufilan seddex bilood markay ku jiraan dhibaatadan. Haatanna shuruudaha nadiifinta cusub ee loo baahan yahay iyo diiwaangelinta oo hooseysa oo muujineysa in saadka loo baahan yahay ay sii kordhinayso dhibaatada, ”ayay tiri Deeann Puffert, oo ah madaxa CCAWA. “Aad baan ugu mahadcelinayaa Waaxda Ganacsiga deeqdan cajiibka ah iyo sida ay uga go’an tahay inay caawiyaan bixiyeyaasha daryeelka carruurta ee gobolka. Waan ogahay inay macno badan yeelan doonto! ”
Iyada oo gacan laga helayo deeqda ganacsiga, CCAWA waxay dhowaan soo gaarsiin doontaa in ka badan $ 260,000 oo saad ah iyada oo loo marayo sagaal xarumood oo qaybinta gobollada ah oo istiraatiiji ah oo ku yaal gobolka oo dhan si loo yareeyo safarka, gaar ahaan meelaha fog fog ee miyiga ah. Waxay sii wadayaan kormeerka guud iyo welwelka saadka ee usbuuclaha ah iyo iibsashada bartilmaameedka si loo daboolo baahiyaha la cayimay. Sahayda waxaa la siiyaa oo keliya xarumaha daryeelka carruurta shatiyeysan iyo xarumaha daryeelka carruurta ee qoyska oo furan.
Mid ka mid ah bixiyeyaasha ayaa qoray: "Alaabtaan waxay aniga ii sameeyeen farqi weyn maadaama aysan macquul aheyn inaan aado 10 dukaan si aan u helo waxa aan u baahanahay kadib 10 saacadood oo aan shaqeynayay." Aniga oo ah bixiye xanaanada cunugga waxaan ubaahanahay wax ka badan inta dukaanka raashinka maxaliga ahi ii oggol yahay maxaa yeelay waxay kaliya ka fikiraan baahida macaamiishooda inay u tahay qoys yar. ”
Xitaa iyada oo in ka badan 13,000 oo sahay la iibsaday ilaa maanta, baahi weyn ayaa jirta. Toddobaadka ugu horreeya 4th ee fasaxa bisha Luulyo, CCAWA waxay u isticmaashay qaar ka mid ah miisaaniyada gobolka inay ku iibsato sahay badan oo la keenayo toddobaadyada soo socda.
Sida mid ka mid ah bixiyeyaasha xanaanada cunugga u dhigay: "Tan (kaalmadan) runti, hal mar, waxay iga dhigtay inaan dareemo inaan runtii muhiim ahay."
Daryeelka Carruurta ee Washington ayaa aruurineysay tabarucaad iyo agab bixiyeyaasha xanaanada cunugga si ay uga caawiso dhibaatada COVID-19. Deeq Ganacsi ah $ 120,000 ayaa ka caawisay CCAWA inay ballaariso dadaallada gobolka oo dhan. Lahaanshaha sawirka Child Care Aware ee Bariga Washington.
Sahaydu waxay ku sii jeedaan xarumaha daryeelka carruurta iyada oo loo marayo shabakad ka kooban sagaal xarumood oo wax lagu qaybiyo oo ku baahsan gobolka oo dhan, midkan oo ku yaal Spokane. Deeq dawladeed oo ka socota Wasaaradda Ganacsiga ayaa ka caawisay hay'adda samafalka inay horumariso oo ay hirgeliso qorshe wax iibsi oo badan. Lahaanshaha sawirka Child Care Aware ee Bariga Washington.
← Xafiiska Gobolka ee Dhallinyarada Hoylaaweyaha ah ayaa ku abaal mariyay $ 1.4 milyan oo deeq ah Aqoon-isweydaarsiga kama dambaysta ah ee ku saabsan xeerarka la soo jeediyey ee loogu talagalay Heerka Dhismaha Ganacsi ee Nadiifka ah waa Julaay 9 →